Suspension Clamp ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Suspension Clamp စက်ရုံ
အမွှာ Jumper လျှပ်ကူးစက်များအတွက်ဆိုင်းထိန်းညှပ်
Catalog No. ဝါယာကြိုးအချင်း၏သက်ဆိုင်အဓိကအရွယ်အစား （မီလီမီတာ ified သတ်မှတ်ထားသောပျက်ကွက်မှု （KN） အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ်） L1 L2 CR h ∅ M XTS-1 18 ~ 24 200 50 19 13 57 18 16 70 4.5 XTS-2 25 ~ 31 200 56 19 16 62 18 16 70 5.0 XTS-2A 17 ~ 21 200 50 19 11 57 18 16 70 4.5 XTS-2B 21 ~ 27 200 52 19 14 59 18 16 70 5.0 XTS-5 23 ~ 33 200 60 20 17 55 18 18 100 4.2 XTS-6 34 ~ 45 ...
Suspension Clamp သည်တိုင်များနှင့်နံရံများရှိ LV-ABC cable လေးခုအားတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဆိုင်းငံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ •ညှပ်အားအပူအအေးခံသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ညှပ်အားကေဘယ်လ်ကာကွယ်မှုကိုမထိခိုက်စေဘဲအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ •အချည်းနှီးသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိ။ • Standard: EN 50483-2 Catalog No. သင့်လျော်သော conductor JSC-14× 16 ~ 35mm2 JSC-24× 50 ~ 120mm2 JSC-34× 50 ~ 70mm2 ...
ABC ရုပ်သံ cable ကိုများအတွက်ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ်
XJG စီးရီးသည်ဝေဟင်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးရပ်ဆိုင်းမှု insulator တွင်လည်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် Hook အမျိုးအစား users အသုံးပြုသူများအတွက်ပတ္တာအမျိုးအစားနှင့်တင်ပို့မှုအမျိုးအစားကိုပေးသည်။
ABC cable ကိုအတွက် NYLON- ရပ်ဆိုင်းမှု - ညှပ်
1A 1B ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ်ကိုသီးခြားထားရှိသောကြားနေ messenger ဖြင့်တိုင်များပေါ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုထောက်ပံ့သော LV-ABC ကေဘယ်လ်ကြိုးကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် NFC Type Suspension Clamp ကို ဦး ဆောင်နေပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆေးထိုးခြင်းမှည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည် UV Resistant Glass Filled Nylon ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင်အားသာချက်များမှာ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်။ , cable ကို push type ကိုလီဗာ၏ညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့်ဆုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆက် ...
ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် (trunnion type)
XGU စီးရီး trunnion type တွင်ပုံသွင်းနိုင်သောသံ suspension clamp / electric pole clamp ကို overhead electric line အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ insulator တွင်ရှိသော conductor ကိုသို့မဟုတ် lamp Tower တွင်ရှိသောလျှပ်စီးပတ်လမ်းကိုဆက်သွယ်ထားသော fittings များမှတဆင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသံလိုက် hysteresis & eddy current ၏ minium ဆုံးရှုံးမှုအပြင်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့်အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်း၏စံနှုန်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘယ်တော့လဲ ...
မြေပြင်နှစ်နေရာဆွဲထားနိုင်သောအချက်အလက်များကြိုတင်လိမ်ထားသော suspension clamp Clamp ကိုယ်ထည်နှင့်အစောင့်များကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Cotter-pins များသည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ (၁) ဆိုင်းထိန်းစနစ်ညှပ်၏မြင့်တက်နေသောထောင့်သည် ၂၅ ဒီဂရီထက်မနည်းပါ။ (2) ချိတ်ဆွဲဝါယာကြိုးကလစ်၏အဖြစ်များတတ်သည်၏အချင်းဝက်ဟာ installed ဝါယာကြိုး၏အချင်းထက်နည်း 8 ကြိမ်ဖြစ်ရမည်။ (3) ကွဲပြားခြားနားသောဝါယာကြိုးများပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့ဝါယာကြိုးကလစ်၏ဆုပ်ကိုင်အင်အားနှင့် rated te ၏ရာခိုင်နှုန်း ...
ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် XG 4022
Suspension Clamp （အိတ်အမျိုးအစား） Suspension wire ကိုအဓိကအားဖြင့် overhead power lines သို့မဟုတ် substations များတွင်အသုံးပြုသည်။ ဝါယာကြိုးနှင့်လျှပ်ကူးစပယ်ယာများကိုလျှပ်ကာလျှပ်စီးကြိုးပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသို့မဟုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုတိုင်တိုင်ပေါ်တွင်သတ္တုပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိနှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံမဏိနှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ ၂၅ ထက်မပိုစေနှင့်။ curvature ၏အချင်းဝက်သည်အချင်း၏ ၈ ဆထက်မနည်းစေရ။
Suspension Clamp （Envolope အမျိုးအစား） XGH စီးရီး suspension clamps များသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို conductor များအားချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ Clamp ကိုယ်ထည်နှင့်အစောင့်များကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Cotter-pins များသည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Catalog အမှတ်သင့်တော်သော conductor Dia ။ မီလီမီတာ） အဓိကအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) သတ်မှတ်ထားသောပျက်ကွက်မှုပမာဏ (ကီလိုဂရမ်) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. ။